Isku xidhka tuubada SS | Tuuboyinka xajin
Isku xidhka tuubada SS
Waxaan nahay lambarka koowaad ee sanduuqaaga, waxaan ku siineynaa wararka ugu muhiimsan ee warshadeynta kaa dhigeysa inaad ka caqli badan tahay iyo hal talaabo oo ka horreysa suuqan xawaaraha ku socda ee tartamaya.
Ilaa 40% oo ka mid ah dhuumaha gaaska ee korontada waa dhuumaha dhulka laga isticmaalo. Doorashada habka isku xirnaanta saxda ah waxay gacan ka geysan kartaa sare u qaadista waxtarka waxayna leedahay wax weyn saamaynta faa'iidooyinka dhaqaale ee mashruuca oo dhan.
Warshadaha dhalinta korontada ee dalka Mareykanka ayaa si xawli leh u kobcaya, shirkadaha dhismaha iyo maamulida warshadaha laydhka iyaguna isbadala. Tirada warshadaha tamarta gaaska dabiiciga ayaa sii kordhaya, boqolleyda dhirta korantada ee dalka ayaa sii kordheysa. Ilaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo sida dabaysha, qoraxda iyo tamarta korontada ayaa gaaska dabiiciga u isticmaalaya ilaha shidaalka.
Maanta, qiimaha alaabta ceeriin ee ka hooseeya waxay abuurtay qaab ay ilaha kala duwan ee shidaalku u siman yihiin, ilaha tamarta la cusboonaysiin karana ay si tartiib tartiib ah caan u yihiin. Natiijada muuqata ee u guurista gaaska dabiiciga ah iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo ayaa ah in Mareykanku uu aad uga yaryahay warshadaha tamarta dhuxusha shida. Dhowr sano ka hor, dhuxul-dhagax waxay adeegsan jirtay qiyaastii 75% tas-hiilaadka. Maanta, wax ka yar 35% dhirta korontada ayaa isticmaala dhuxusha.
Dhinacyada qaab dhismeedka koronto dhalinta ayaa sidoo kale isbadalo lagu sameeyay, isbadaladan waxay saameeyeen hirgelinta jiilalka cusub iyo dayactirka. Toban sano ka hor, qandaraasyo injineer, soo iibsi iyo dhisme (EPC) ayaa hadda ka soo muuqday warshadaha dhalinta tamarta. Maalmahan, qandaraasyada EPC waa wax aad u badan, shirkado badan oo badana waxay bixiyaan qiimo go'an mashruuca EPC ee jawi tartan badan.
Raadinta dariiqooyin lagu yareeyo waqtiga shaqada ee goobta isla markaana loo kordhiyo waxtarka dhismaha ayaa noqotay qayb ka mid ah caadigan cusub. EPC waxay abuureysaa naqshad jilicsan oo "goyn kara oo dhejin karta" shaqada mustaqbalka si ay u bixiso xalal ku habboon. Ku guuleysiga hirgelinta tallaabooyinkani waxay keeneen hoos u dhac weyn oo ku yimid jadwalka mashruuca, kaas oo si joogto ah u beddelay filashooyinka milkiilayaasha hantida. Maanta, waa suurtagal in lagu dhammaystiro warshad tamarta gaaska ku shaqeysa laba sano iyo bar, marka loo barbardhigo shan sano ka hor oo keliya dhowr sano ka hor. Taas macnaheedu waxa weeye in wershaddu ay soo saari karto koronto oo ay soo saari karto dakhli waqtiga badhkiis.
Marka laga eego aragtida milkiilaha, go'aanka ah in inta badan la abaalmariyo mashaariicda waxay ku saleysan tahay shirkadda dhisi karta warshadda sida ugu dhaqsaha badan uguna tayada wanaagsan, taas oo markaa si deg deg ah ugu gudbeysa wax soo saar iyo soo saar dakhli. Shirkadaha dhismaha, tani waxay kordhisaa saamiyada waxayna siisaa faa'iido tartan ah shirkadaha la kulmi kara qorshooyinka degdegga ah.
In kasta oo isbadalo badan ay ka dheceen warshadaha dhalinta awooda, waxyaabo aad u muhiim ah ayaa wali sidii hore ahaa. Shirkadaha dhismaha, dadku waxay had iyo jeer rajeynayaan inay bixiyaan badbaado, hufnaan, kalsooni iyo tayo. Si kasta oo ay caqabadaha mashruucu la kulmaan, milkiilayaashu waxay rajaynayaan in shirkadda dhismaha ay ku gaari doonto natiijooyin waqtigii loogu talagalay iyo miisaaniyadda iyagoon wax u dhimayn shuruudahaas muhiimka ah midkoodna.
Milkiilayaasha warshada tamarta ayaa go'aano maalgashi ka gaaraya mashaariic cusub iyo kuwa dib u habeyn ah, iyo in badan oo ka mid ah warshadaha tamarta ayaa u muuqda inay gaaska dabiiciga u isticmaalaan shidaal ahaan Marka loo eego xogta laga helay Maamulka Macluumaadka Tamarta Mareykanka, oo aruurisay xog taxane ah warshadaha tamarta Mareykanka, celceliska qiimaha dhismaha warshadaha tamarta gaaska dabiiciga sanadkii 2017 wuxuu ahaa qiyaastii US $ 920 / kW. Tani waxyar ayey ka sarreeysaa qiimaha lagu dhisayo wershad koronto oo ay waddo dareeraha batroolka, laakiin aad ayey uga jaban tahay dhismaha warshad ay waddo tamarta la cusboonaysiin karo.
Isku xirka dhuumaha dhulka hoostiisa ah waxay lamid yihiin alxanka. Qof kasta oo waligii kaqeybqaatay mashaariic ay kamid tahay alxamiddu waa ogyahay in alxamiddu ay keento caqabado. Ruqsad shaqo oo kulul waa in la helaa ka hor inta aan shaqada la bilaabin, alxamiduna waxay u baahan tahay shaqaale xirfad leh, oo aan had iyo jeer sahlaneyn in la helo, gaar ahaan suuqa shaqada ee maanta adag. Intaas waxaa sii dheer, maadaama alxamidu ay ku tiirsan tahay cimilada, xaaladaha adag ayaa hoos u dhigi doona horumarka. Xaaladaha qalalan iyo dabeylaha, alxamiddu badanaa waxay ubaahantahay dabagalka dabka, taas oo macnaheedu yahay in shaqaale dheeri ah loo diro goobta ayna sababi karto dhaawacyo.
Halkii aad ku dhegi laheyd shaqada inta badan la qabto, waxaa laga yaabaa inay faa'iido u leedahay in la kala bixiyo meshka oo la tixgeliyo adeegsiga isku-xidhka mashiinka meertada ah halkii alxanka. Tuubooyinka korontada ee loo isticmaalo biyaha tuubada, biyaha qaboojinta, nidaamyada hawo, glycol iyo nitrogen, tuubooyinkan waxay xisaabtami karaan 30% ilaa 40% oo ka mid ah qaybaha tuubbada ee shaqadan, iyo isticmaalka kala goysyada mashiinka godan (Jaantus 1) waxay noqon kartaa U horseed kaydinta kharashka.
1. Kala goysyada mashiinka ee Slotted waxay badbaadin karaan qarash badan waxayna hagaajin karaan waxtarka dhuumaha dadweynaha ee dhulka. Xushmad: Victaulic
Isku-xidhka farsamooyinka la jeexjeexay ayaa aad u yaqaan inta badan EPC iyo shirkadaha dhismaha. Sanadihii la soo dhaafay, dad badan ayaa u adeegsaday tikniyoolajiyaddan nidaamka dabka, kuleylka, hawo-siinta iyo hawo-qaboojinta (HVAC). Qandaraaslayaashu waxay u egyihiin inay adeegsadaan isku-xidhkaan si ay u kordhiyaan xawaaraha iyo isku halaynta, ayna u horumariyaan nabadgelyada Rakibaadda isku xidhka uma baahna adeegsiga shaqo heer-kulkeedu sarreeyo ama oggolaansho gubasho, sidaa darteed rakibayaashu qiiq ama olol lama kulmayo, loomana baahna in laga hortago taangiga biyaha, shuclada ama hoggaanka inta lagu jiro hawsha rakibidda.
Maamulka shaqaaluhu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah mashruuc kasta oo dhismo, qof kasta oo ka tirsan warshadaha dhismaha waa inuu wax ka qabtaa yaraanta shaqaalaha xirfadleyda ah. Waqooyiga Ameerika, helitaanka dadka saxda ah ee leh xirfadihii loo baahnaa way adkayd, shaqaale la'aantuna waxay saameyn taban ku leedahay jadwalka mashruuca.
Maanta, yaraanta shaqaalaha ee Waqooyiga Ameerika waa ka daran tahay sidii hore, mana jirto xal loo helo dhibaatadan. Xaqiiqdu waxay tahay in haddii mashruucu ka maqnaado xoog waxqabadyada muhiimka ah sida alxamida, saameynta mashruuca ay noqon doonto mid ballaaran.
Isticmaalka isku-xidhka farsamada jeexjeexan ayaa ah hab casri ah oo kharash-ku-ool ah. Marka la barbardhigo alxanka, tiknoolajiyadaani waxay leedahay faa iidooyin sababtoo ah uma baahna farsameyn kuleyl ah, ogolaansho gubasho la'aan, saacad dab-demis iyo raajo, iyo naqshadeynta fudud ee qalabka isku-xirnaanta ayaa lagu rakibi karaa iyadoo la adeegsanayo qalabka gacanta caadiga ah.
Mashruucii ugu dambeeyay, in kabadan 120 taayirrada tuubooyinka ayaa loo tababaray inay ku rakibaan kala goysyada mashiinka mashiinka wax kayar 20 daqiiqo Kooxdaan tuubbada fidiya waxay si dhakhso leh u fulin karaan mashruuca oo dhan shilal la'aan. Celcelis ahaan, xitaa kuwa bilowga ah, rakibidda nidaamka mashiinka dhejiska waa 50% ilaa 60% ka dhakhso badan alxanka (Jaantuska 2).
2. Marka loo barbardhigo alxanka, waqtiga rakibaadda ee kala goysyada mashiinka daloolka ayaa ka dhakhso badan oo waxtar badan. Xushmad: Victaulic
Faa'iidada kale ee adeegsiga isku xidhka mashiinka jeexjeexan ayaa ah in nidaamka horay loo sii diyaarin karo, taas oo kaliya bixinaysa joogtaynta wax soo saarka, laakiin sidoo kale waqti badbaadinaysa sababta oo ah dabaqadda ayaa lagu rakibi karaa goobta dhismaha. Marka la barbardhigo isku imaatinka goobta, dejinta hore waxay badbaadin kartaa wax soo saar badan waxayna hagaajin kartaa amniga.
Rakibaadda saxda ah ayaa lagama maarmaan u ah qaybaha ka mid ah dhirta korontada, taas oo ah mid ka mid ah sababaha hubinta tababbarka iyo u qalmidda walxaha ay aad muhiim u tahay. Way adag tahay in lagu kala sooco tayada alxanka dhammeeyey fiiro gaar ah, xitaa baaritaanka ama raajada marwalba ma aqoonsan karo walxaha daciifka ah. Alxamid aan si khaldan loo samayn waxay noqon kartaa mid aad qaali u ah, taasoo u horseedi karta khasaaro jireed iyo mid dhaqaale intaba.
Muuqaalka isku-xidhka mashiinka laysku xidho ayaa la baari karaa, fududaynta xakamaynta tayada iyo awood u siinta rakibayaashu inay xitaa leeyihiin xirfado aasaasi ah si loo xaqiijiyo in wadajir kasta oo sax ah loo rakibay. Tani waxay baabi'ineysaa dukumiintiyada kale ee lagu xakameynayo tayada ee looga baahan yahay baaritaanka alxanka, oo ay ku jiraan raajada iyo / ama baaritaanka dheeha.
Kalagoysyada farsamada sidoo kale way fududahay in la ilaaliyo. Dhaqan ahaan, hagaajinta kala-goysyada alxanka leh ayaa waqti badan qaadata oo qaali ah. Si kastaba ha noqotee, beddelidda kala goysyada mashiinka duuban ayaa u fududahay sida iyaga loo rakibo, maaddaama ku dhowaad qof kasta oo ka shaqeeya warshad koronto loo tababbari karo inuu ku beddelo daqiiqado yar gudahood, kaydinta qiimaha badan ayaa lagu gaari karaa waqti ka dib (Jaantuska 3). Iyadoo la tixgelinayo in warshad koronto oo caadi ah 1,000 MW ay soo saari karto $ 1 milyan oo dakhli maalintii ah, iyadoo la xaddidayo waqtiga ay korontada ka bixi karto ama ka hoosayn karto awood buuxda ay keeni karto faa iidooyin aad u tiro badan.
3. Marka loo barbardhigo xalalka alxanka, adeegsiga xalalka Victaulic waxay shaqaalaha ka dhigi karaan kuwo tayo badan. Xushmad: Victaulic
Isku-xidhka farsamada jeexjeexan ayaa loo isticmaalay sanado badan dalabyo badan oo warshad koronto ah oo ku yaal dhowr xarumood oo awood sare leh. Tiknoolajiyaddan waxaa la isticmaali jiray in ka badan 100 sano waxayna leedahay rikoodh lagu kalsoonaan karo.
Intii lagu gudajiray mudo xiritaanka dhirta warshad tamarta korantada ee New Jersey, xalinta mashiinka mashiinka ayaa ogolaaday rakibida biyo qaboojin cusub iyo nidaamyada ilaalinta dabka gudahood caqabadaha waqtiga daran. Warshad ku taal Pennsylvania, isku xidhka farsamada jeexjeexan ayaa loo isticmaalay in lagu cadaadiyo khadadka hawada iyo khadadka hawada qalabka si loo buuxiyo jadwalka dhismaha ee la dedejiyey; si la mid ah, warshad ku taal Arkansas waxay adeegsatay hawo qalab, hawo is cadaadisay sabab la mid ah. Teknolojiyadaan waxaa loo isticmaalaa hawada, biyaha la qalajiyey iyo khadadka biyaha qaboojiya. Mashruuca is-beddelka ee warshad koronto oo ku taal Alaska, shaqada kuleylka sare looma oggola goobta iyo shaqaale xirfad leh ayaa ka maqan. Nidaamku wuxuu adeegsadaa nidaamka isku xidhka tuubbada farsamada si loo cusbooneysiiyo nidaam dheeri ah oo loogu talagalay helitaanka biyaha marawaxadaha uumiga, sidaas darteedna xal loo helo Ma aha oo keliya inuu buuxiyo shuruudaha ah in aan la qaban hawlo heer-kulkeedu sarreeyo, laakiin sidoo kale wuxuu badbaadiyaa kumanaan doollar foosha iyo jadwalka.
Sida qaybo kale oo badan, waaxda dhismaha sidoo kale waxaa saaran cadaadis ah inay kordhiyaan waxtarka isla markaana keydiyaan kharashyada. Tani waxay dalabyo sare saaraysaa milkiilaha, EPC iyo qandaraaslaha. Hadda in ka badan sidii hore, waxaa jira baahi loo qabo in la qiimeeyo oo loo adeegsado habab hal-abuur leh si loogu guuleysto fulinta mashaariicda miisaaniyadda ama miisaaniyadda ka baxsan.
Marka xaaladaha suuqa ay xaddidan yihiin oo qasan yihiin, bixinta xalal lagu kalsoonaan karo ayaa si gaar ah muhiim u noqonaya. In kasta oo ay u muuqan karto wax iska caabin ah in qaab kale loo wajaho xaaladahaas adag, xaqiiqda, xaaladdan, xalka dhaqameed wuxuu noqon karaa caqabadda ugu weyn. Ma jiro waqti ka wanaagsan hadda oo laga fikiro adeegsiga nidaamyada isku xirka biibiile Victaulic ee farsamada ka baxsan. ■
—Dan Christian waa injineer u kireysan Victaulic tamarta iyo batroolka iyo agaasimaha suuqyada tamarta adduunka, halka Chris Iasielo, PE uu yahay khabiir ku takhasusay dhalinta tamarta Victaulic.
Mid ka mid ah mashaariicdii ugu horraysay ee tamarta qoraxda (CSP) ee adduunka adeegsada iyadoo la adeegsanayo heliostats “Stellio”
Dhameystirka bilowga iyo howlgelinta warshad koronto sida caadiga ah waxay ka dhigan tahay riixitaanka qandaraaslaha guud inuu soo koobo inta hartay oo dhan…
Milkiileyaasha iyo horumariyeyaasha warshadaha korontada, wey adkaan kartaa in go'aan laga gaaro wareeg fudud ama wareeg la isku daray between